China aluminom magnesium manganese ala vetikal n'elu igwe usoro rụpụta na ụlọ ọrụ | Yi'an
Nnukwu ike ndọda nke aluminom magnesium manganese alloy bụ 1/3 nke nke mpempe akwụkwọ a na-acha agba, mana ndụ ọrụ ya nwere ike iru karịa oge 3. N'ihi ọdịdị ya dị nro na plastik, enwere ike ịme ya n'ime efere aluminom magnesium manganese fan, aluminom magnesium manganese arc ekara efere, wdg, nke na-ezute ihe achọrọ maka imepụta mma na ịdịte aka nke ụlọ igwe. Ya mere, a na-ejikarị igwe ụlọ nke magnesium manganese metal rụọ ọrụ nke ukwuu na elu ụlọ nke ámá egwuregwu na ọdụ ụgbọelu, rooflọ ihe nkiri nke ụlọ ihe nkiri, ụlọ elu ụlọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị elu, ụlọ ndị mepere emepe, ụlọ obodo na ụlọ ndị ọzọ buru ibu.
Uru nke aluminom magnesium manganese system system:
1. Nchekwa ma kwụsie ike:
Usoro a nwere ike belata nrụgide ọ kpatara na
ọnụ ụzọ na n'èzí dị iche iche dị iche iche na oge oyi dị egwu site na ntinye ntinye nke ụdị T-ụdị kwadoro. A na-ezere extrusion efere na nrụrụ nrụrụ nke nrụgide na-enweghị atụ.
Igwe nke usoro a na-ejide 360 ​​Celsius na-ejigide ma na-etinye teknụzụ yiri nke T, nke na-eme ka nkwụsi ike na nkwụsị nke usoro ahụ ghara ịbanye. Ọ bụghị nanị na ọ na-eme ka arụmọrụ nke mmiri na-enweghị mmiri na ikuku na-arụ ọrụ, ma na-ejigide ihe ndị mejupụtara nke aluminom alloy ka ọ ghara imebi, ka ọ wee rụọ ọrụ nke ọma nke nkwụsị nke corrosion.
2. Ihe mkpuchi ahụ na-arụ ọrụ ọkụ
Site na ịhọrọ ọkpụrụkpụ ihe kwesịrị ekwesị nke ihe mkpuchi mkpuchi ihe, ihe owuwu ụlọ nwere ike izute ọkwa dị elu nke ihe mkpuchi ọkụ chọrọ naanị obere mgbanwe. N'otu oge ahụ, efere usoro ụlọ nwere ike iguzogide ọkụ na ire ọkụ, na efere elu ígwè ahụ nwere ike izute ụkpụrụ nchekwa ọkụ A1.
3. Ike agwụ agwụ ngwa
Enwere ike ịwụnye ogwe snow na nsọtụ vetikal nke usoro sistem ụlọ na-enweghị riveting. Elu ụlọ anaghị emebi emebi ma na-anọgide na-emebi emebi iji hụ na ịrụ ọrụ akara ahụ. Ọrụ mmezigharị bụkwa ihe a pụrụ ịtụkwasị obi. Efere usoro ụlọ elu nwere njirimara nke nkwụsi ike na ịdị arọ dị ala.
Nke gara aga: Aluminom magnesium manganese elu vetikal ụlọ usoro
Osote: Greene photoelectric usoro
Safety ọdịda usoro mgbochi
Greene photoelectric usoro